10 isbeddellada qaabdhismeedka sannadka 2018 ee ay tahay inaynaan gadaal uga tagin | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Fuentes, Khayraadka
Hadday tahay naqshad calaamadeysan, naqshadeynta websaydhka, ama naqshadeynta garaafka, isbeddellada qaabdhismeedka ayaa si xawli leh isugu beddela oo aan badanaa suurtagal ahayn in la sii wado, xitaa kuwa ka shaqeeya warshadaha. Si la mid ah midabada, noocyada muuqaalka waxay leeyihiin awood ay ku abuuraan shucuur waxayna wax badan ka oran karaan shakhsiyadda astaantaada. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in la doorto nooca loo yaqaan 'typeface' kaas oo si fiican ula jaan qaadaya shakhsiyadda astaantaada, gaar ahaan markay tahay astaantaada, boggaaga, ama shaxankaaga.
Kahor intaadan dooran nooc, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa hadda ka socda warshadaha nooca qoraalka waana laga tagay. Daraasaddan ama diiwaangelintu waxay naga caawin kartaa inaan helno isha saxda ah ee lagu go'aamin karo shaqo wanaagsan iyo qanacsanaanta dhinaca macmiilka.
Sawir keli ah ayaa iftiiminaya nooca noocyada noocyada ay noqonayaan kuwa ugu muhiimsan sanadka 2018 si aad ugu adeegsato mashaariicdaada. Ha joojin akhriska oo u diyaar garow inaad xusuusato waxa naqshad guuleysan ay noqon doonto sannadkan.
1 Qor xarfaha soo socda
Qor xarfaha soo socda
Serif ayaa xukumi doona. Isku darka Sans serif ee 2017, laakiin waa la cusbooneysiiyay.
Retro waxay sameysaa soo laabasho. Qaab sida magaceedaba ka muuqata, retro. Qaabka ugu nadiifsan ee 80-naadkii. Waxayna u muuqataa in 8-da sanadkan ay saameyn ku yeelan doonto dib ugu soo noqoshada isbeddellada qaabka qorista. Muddo aan sidaa usii fogeyn, sanadkii 2013, waxaa sidoo kale loo adeegsaday cilmi baarista Shanghai Jiao Tong Top 200. Ama ugu yaraan aad isugu eg.
Ka weyn ayaa ka fiicnaan doona. Kaliya laba erey ayaa qeexaya. Weyn iyo Madoow. Sida muuqata wax badan. Sababtoo ah aad iyo aad bay u ballaadhan tahay oo weynaan tahay. Wanaagsan
Joojinta iyo isdhaafinta. Qoraallo fara badan oo taariikhdo kaladuwan oo yaab leh leh.
Dulucda iyo hoosta ka xariiq. 2018, ayuu sharraxay, waxay noqon doontaa sanadka hoosta laga xariiqay ama ay dhahaan. Marka hadda waad ogtahay, inaad ka soo ceshato waxyaabaha iftiimiya jaamacadda.
Waraaqaha Gacanta. Loogu talagalay naqshadeynta astaanta, xaraf xusuusin ah oo ku saabsan qorista gacanta, sida magaca ka muuqata.
Cunnooyinka ayaa la wareegi doona. U diyaargarow adduun iftiin iyo midab ka buuxo.
Astaamaha Caadiga ah ayaa soo bixi doona. Farqiga u dhexeeya shirkadda iyo kuwa lagu sameeyo guriga.
Fontiyo Midab Leh Ayaa Noqon Doona Midabka Cusub. Waxay u egtahay nooca 2.0 ee Mr. Wonderful, laakiin leh 'geesinimo' taabasho noocyadeeda buuxisa.
Daahfurnaan xagga qoraalka ah. Asal midab leh oo loogu talagalay qaabka qoraalka oo leh hufnaan gaar ah.
Sannadkii 2017-kii ayaa toban kale oo nooc oo kala duwan ahi noqdeen kuwo mooddo leh ama isbeddel noqday, sida lagu sharraxay sawirka, kuwani maanta muhiim ugama aha goobta. Laakiin dhib malahan in la xasuusto si aanad u khaldamin, ama yaa og, inaad beddesho isbeddellada oo aad sameysato summad gaar ah. Farqiga u dhexeeya isla sannadkan ayaa ah in magaca iyo farta lafteedu ay kala duwan yihiin. Sannadkan kacdoon iyo ikhtiraac ayaa la raadiyay, halka sanadkii ka horreeyay-in kastoo aan la dayacin- far ka badan oo caan ah ayaa loo adeegsaday naqshadayaasha.
Kuwaas waxaa ka mid ah Arial. Naqshadeeyay Robin Nicholas iyo Patricia Saunders oo ka socda Hay'adda 'Monotype Foundation' iyadoo laga jawaabayo caan ahaanshaha nooca 'typeotype' ee 'Linotype' Helvetica. Waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee aan helno markii aan fureyno tifaftire qoraal kasta, si kastaba ha noqotee, waxay maamushaa inay siiso ciyaaro badan.
Ciyaarta waxaa raaca kuwa kale oo caan ah sida Helvetica, Myriad Pro, Georgia ... Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan, in kasta oo ay jiraan kuwo kale oo magacoodu yar yahay. DIN, Futura, Cabin, Gotham, Corbel iyo goothic league. Dhammaantood waxay dhammaystiraan 2017 iyagoo adeegsanaya dhammaan adeegsiga suurtagalka ah. Sida cinwaanada webka iyo qoraalka jirka 49% naqshadeynta. Wargeysyadu waxay kordhiyaan suurtagalnimada, inkasta oo inyar iyo inyar, warbaahin kastaa waxay sii deyneysaa qaabkeeda gaarka ah sida ku dhacda YouTube qof walbana wuxuu la qabsan doonaa magacyadiisa
Marka la barbardhigo, miyaad ka mid tahay kuwa ku sharaddeeyay kacaan sannadkan ama liddi ku ah, miyaad wax badan ka sharadaysaa dhaqdhaqaaqa dhaqameed ee 2017? Marka loo eego garaafka, in ka badan 90.000 nooc ayaa jira, sidaa darteed waad u qaabeyn doontaa sidaad u jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 10 isbeddellada qaabdhismeedka sannadka 2018 ee ay tahay inaynaan gadaal uga tegin
Sawirada dhabta ah ee farshaxankan iskiis wax u baray
James Dyson Awards ayaa soo laabtay, mashaariic cusub oo abaalmarin weyn leh